“ODUU MASARAA KEESSAA MILIQXEE BAATE ዳቆን ዳኒሐል ከብረት (Daani’el Kibiriit) - Kichuu
HomeAfaan OromooNews“ODUU MASARAA KEESSAA MILIQXEE BAATE ዳቆን ዳኒሐል ከብረት (Daani’el Kibiriit)
Gidduu kana shira jabaatu xaxamaa jira; masaraa keessatti. Waayillan isaa biyya alaa jiraniif kan keessa jiran wajjiin marii bal’aa geggeefatanii murtoo isa dhumaatiin goolabamaniiru. Dhimmi jabaan irratti mari’atan waa’ee Oromooti. Adeemsi jiru isaan yaaddesseera. keessumatti ammoo sochii #WBOn godhaa jiru waan isaan yaaddesseef ‘carraa amma masaraa keessa jirru kanatti fayyadamnee masaraa kana bifa mootummaa fonqolchuutiin dhuunfachuu qabna’ kan jedhu lafa jalaan xumuraniiru.
Giddu kana ዳቆን (Daaqon Daani’el Kibirit) tarkaanfii laaleessa nama tokko irratti fudhatee bakka qabachuuf tooftaa isaa xumureera.
Oduu kana amanuu dhiisuu maltu.
Garuu gurra keessaa qabaadhaa .
Kan nama dhibu alagaa hangam yoo tolaati oolteef akkasuma waliin hojjettellee abadan of bira nama hin jiraachisan.
Namuma toleef sana balleessuu malee, ‘galatoomi’ namaan jechuunillee afaan isaaniirraa hin ba’u. Qalbii isaanii keessallee hin jiru.
Abiyyiin isaan waliin tokko ta’ee kaayyoo isaanii qabatee mootota isaanii ykn asxeewwaniif siidaa ijaaraa ture.
Faallaa kanaatiin ammoo barattoota Oromoo ajeesisaa, Qeerrroo fi ummata Oromoo kumaatamaan hidhaatti guursisaa jira. Osoo Abiy gocha akkanaatti jiruuti, shira kana irratti yaaduu isaaniitu nama ajaa’iba. Seenaa jaraa keessatti obboleessa ofii ajjeesanii aangoo qabachuun aadaadha.
Aangoo baay’ee jaalatu. Dr Ambaachoo kan ajjeesee Oromoo ykn saba biraa miti. Akkuma hundi keenyayyuu beeknu, jarumatu taayitaaf jedhee wal gaggalaafate.
Kan wal ajjeesan saba biraaf ammoo maal shakkisiisa ree?
Abiy ofiis badee biyyas balleessuuf nafxanyoota kana akka tisiisaa ofitti naannessee taa’aa jira.
Ilmaan nafxanyaa inni masaraa isaatti naqatee ofitti naannessee taa’u kunneen,
“Afaan Oromoo dubbadhu” jedhanii gaafa gurratti si asaasan adeemsi fi tooftaan isaan ummata keenya sossobanii qabachuun akka fedhanitti ajjeesanii bulchuuf deeman namaaf gala.
Har’a yoo nu ajjeesanis ‘wayyoo ni duutan’ jedhee kan nuuf boo’u jaruma kana.
Hundaafuu sadarkka kanarra ga’ee jira haalli masaraa keessaa.
Yaa ummata Oromoo sabni waraana mataa isaa fi meeshaa waraanaa hin qabne yoomuu mo’amaa dha.
#WBO jabeefanna. Kan duraa caalaa amma jabaannee harka wal qabachuudhaan ummata keenya kolonii nafxanyaa jalaa baasuu qabna. Abiy ofiis nafxanyaadha. Nafxanyaan isa achii dhiibbattee yoo teesses kaayyuma isaa saffisiisti. Waan dubbistaniif galatoomaa!”.